Shina: Avela Heloka Ny Mpandripaka Olona Tao Tiananmen? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jona 2012 11:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Filipino, 한국어, عربي, polski, Français, English
Nandritra ny fotoana nanatrehan'olona mihoatra ny 180.000 ny fiareta-tory fanao isan-taona tamin'ny 4 Jona 2012 tao Hong Kong mitaky ny hamaliana faty an'i Shina noho ny zava-nitranga tamin'ny 4 jona (hetsi-panoherana tao an-kianjan'i Tiananmen) no nanoratan'ilay mpitarika mpianatra teo aloha manao sesintany ny tenany Chai Ling tao amin'ny Huffington Post fa efa navelany ny heloky ny mpamono olona nandritra ny fandripahana. Tsy manaiky izany ijoroan'i Chai Ling izany ny mpitarika mpianatra iray hafa Wang Dan ka namoaka fanambarana ampahibemaso izay niteraka adi-hevitra.
Eto ambany ny lahatsary mampiseho ny fiareta-tory (fitazonana labozia) ho fahatsiarovana ny faha-23 taona ny Fandripahana tao Tiananmen notontosaina tao amin'ny Victoria Park, Hong Kong (navoakan'i MrZuluLo):
Nilaza i Chai Ling fa efa navelany ny helok'i Deng Xiaoping sy Li Peng izay nanome baiko ny tafi-bahoaka handripaka ny mpianatra sy ny mponin'i Beijing teo amin'ny kianjan'i Tiananmen tamin'ny 1989, ary toy izany koa ny mpitondra ao Shina amin'izao fotoana izao izay mbola mangeja ny vahoaka. Teo ampamakiana ny lahatsorany i Wang Dan no nanoratra [zh] izao teo amin'ny takelaka Facebook:
Hajaiko ny hevitr'i Chai Ling mifototra amin'ny finoany. Saingy, tsy afa-manaiky izany aho. Raha mbola tsy manenina sy miala tsiny amin'izany ny mpamono olona ary raha mbola mamono ny hafa ny mpamono olona, tsy misy ny toerana ho amin'ny famelan-keloka. Tsy mety amin'ny niharan'ny zava-nitranga tamin'ny 4 jona ny famelan-keloka toy izany.
Manantena aho fa ho fantatr'izao tontolo izao hoe hevitra sy finoana manokan'i Chai Ling io. Tsy misolotena ny mpianatra niharan'ny toe-draharaha 1989 io.
Mandrisika an'i Chai Ling koa aho hanavaka ny finoana arahina sy ny fomba fitsarana.
Nihoatra ny 200 ny fanehoan-kevitra nanaraka ny fanambarana, manohana an'i Wang Dan ny ankamaroany ary manontany an'i Chai Ling. Eto ambany ny nofantenina tamin'izany [zh]:
Marianne Wong: Miresaka famonoan'olona isika! Tokony aorian'ny fanekena ny fisian-keloka ny famelan-keloka.
Alexander Shen: Tahaka ny nahatsapa izany aho fa tsy olona tsara izy. Avelany ny hafa hampandriaka ny rà raha nandositra izy; lasa olona hafa izy 23 taona aty aoriana. Lasa olona tery saina izy ankehitriny.
陳柏年: Kristiana ihany koa aho. Ankoatra ny fitiavana ny hafa, soatoavina fototra ao amin'ny Kristianisma ihany koa ny rariny, izay ilain'ny mpianatra tafiditra tamin'ny fanoherana 1989 indrindra, ilain'ny vahoaka Shinoa sy i Shina, ilay firenena mipongatra.
Wen-shin Lee: Nisafidy ny hamela i Chai Ling. Saingy tsy midika izany hoe tsy tokony toavina ny rariny. Afa-mifidy ny hamela ny nihara-pamonoana saingy tsy maintsy manefa ny vitany eo anatrehan'ny lalàna ny voaheloka.
Autumn Moon: ‎”Tsy manohitra na inona na inona aho, ary natin'izany i Shina. Saingy hisolo vava ny marina aho ary tiako raha fantatra ny marina.” – HH Karmapa
早雲直心: Tsy nandositra moa izy, mbola hiteny tahaka izao ihany ve izy?
Ming Zhou: Efa nanao ny safidiny i Chai Ling 23 taona lasa izay ary lasa olona fanta-daza. Amin'ny maha-olona fanta-bahoaka azy, tsy maintsy miatrika ny olona izy. Nandiso fanantenana ahy izy. Nijaly izy, tsy hitany ny reniny raha mbola 25 taona izy. Saingy tsy very azy ny reniny, mbola velona miresaka sy miaina malalaka ao anatina firenena demokratika izy… Fa miteny amin'ny anaran'ny havan'ny tao amin'ny Tiananmen ve izy? Niady niaraka tamin'i Chai Ling hisian'ny demokrasia ny zanak'izy ireo. Goavana loatra ny 23 taona nijalian'ireo ray aman-dreny ireo raha oharina tamin'izay niainan'i Chai Ling. Manjary afahafahana miteny ny tahaka izao ny fihetsik'i Chai: “Olona tahaka izao no nitarika ny hetsiky ny mpianatra. Soa ihany fa tsy nahomby fa raha tsy izany dia potika i Shina.” Manantena aho fa afa-niteny an'i Chai Ling ho “kamarady” i Wang Dan any amin'ny takona any tamin'ny 1989. Na dia samy manana ny safidiny aza ny tsirairay, iangavio i Chai tsy hanompa ny 4 Jona, aza vakiana ny fon'ny ray aman-drenin'ny tao Tiananmen, aza manao zavatra manimba ny hetsika demokratika Shinoa. Afa-manjavona izy, manakatona ny varavarana ary mivavaka. Aza manao zavatra mirefarefa izany eo anatrehan'ny hafa. Mino aho fa tsy manaiky ny nataony Andriamanitra.
Misy ny hevitra vitsy manohana an'i Chai eo amin'ny lafiny ara-pivavahana:
Edward Lim: Tsy diso i Chai. Mamela heloka midika ho fanafahana ny olona iray hiala amin'ny fankahalàna izay mbola mandratra tsy olon-kafa fa ny tena ihany. Raha tsy misy ny fiadanam-po, tsy sitrana amin'ny fijaliana ary tsy afa-mandehandeha salama tsara. Mivavaka amin'ny fahavalo mba hampatanjaka ny tena mandritra ny andro. Mbola angatahana amin'ny anaran'ny niharam-pahavoazana ny Fitsarana. Nanao ohatra hamela heloka mialoha ny fiaiken-keloka ataon'ilay olona i Jesoa mba ho afa-keloka madio mangatsakatsaka ireo olona manatona azy miaiky ny helony mialoha ny hahatongavany fanindroany indray. Ho an'ireo mikiry manao rasy ary mandà ny famelana ny helony, hanefa ny fandoavan-ketra izy ireny amin'ny fitsarana farany. Aza afangaro ireo.
Clyde Xi: Eo amin'ny fampianaran'ny Baiboly, fanapahan-kevitry ny tsirairay tsy misy fepetra miaraka aminy ny famelan-keloka. Mihatra voalohany amin'ilay olona mamela heloka izany…